အချစ်ဦးဝက်သားဒုတ်ထိုးနဲ့ အချစ်ထူးမာလာရှမ်းကောလေးကို တစ်နေရာတည်းမှာအပီကြိတ်နိုင်မယ့် ? – FoodiesNavi
By yin sandi On August 29, 2018 0
ချစ်မိတာမကြာသေးတဲ့ မာလာရှမ်းကောလည်းစားချင်တယ် ? အချစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးလည်းစားချင်ပြန်ရောဆိုပြီး ? အတွေးတွေလွန်ဆွဲနေစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ ? အချစ်နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်နေရာတည်းမှာ အပီဆွဲလို့ရမယ့်ဆိုင်လေးထွက်ပေါ်နေပါပြီ ? အချစ်တွေနဲ့ဆုံနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးကတော့ “Hello” တဲ့ ? မာလာရှမ်းကောဆိုင်အသစ်တွေထဲမှာ စားနေကျဆိုင်တွေရဲ့အရသာကိုအမီလိုက်နိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတာမို့ အခုတလော Trend ဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်လေးလို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူးနော် ?
မာလာရှမ်းကောချက်တဲ့နေရာမှာ အဆီအနှစ်အရသာနိုင်နင်းမှုကတော့ ရှယ်ပဲ။ အရသာမှာအနှစ်အရသာပြည့်ဝနေပေမယ့် ဆီအိုင်နေတာမျိုးတွေလုံးဝမရှိဘူး။ အိအိဖတ်ဖတ်လေးနဲ့အရသာပေါ်လွင်တယ်။ မင်မင်ကအထုံပုံမှန် အစပ်ပုံမှန်မှာလိုက်လို့လားမသိ စားရတာအပိုအလိုမရှိလှဘူး။ ခံတွင်းနဲ့အစပ်အဟပ်တည့်နေရောပဲ။ မြေပဲဆံတွေအပြင် ပြောင်းဖူးစိလေးတွေပါထပ်ပေါင်းထားတော့ လျှာဖျားမှာချာချာလည်နေတဲ့ မာလာရှမ်းကောရဲ့စပ်ထုံထုံအရသာလေးက ချိုချိုဆိမ့်ဆိမ့်အရသာလေးတွေနဲ့ ရောသမမွှေသွားပြီး အရသာပေါင်းစပ်မှုမြင့်မားချက်ကတော့ လျှာလည်နေရောပဲ။ ? ပင်လယ်စာကတော့ပုဇွန်တစ်ခုပဲရတယ်ကွယ် ☹️ ပြည်ကြီးငါးလေးတွေနဲ့ဆိုပိုဖိုင်းမယ်လို့ထင်မိတယ် ? အသားလုံးတွေလည်းချထားပေးတာနည်းတယ် တစ်မျိုးကို(၅)လုံးလောက်ပဲချပေးထားတော့ ကိုယ်တွေလိုအသားလုံးခရေဇီအတွက် အမြင်ပိုင်းဆွဲဆောင်မှုနည်းတယ်ပြောရမယ်။
မာလာရှမ်းကောနာမည်ကြီးနေရင်းကနေ ထပ်တိုးပံ့ပိုးလာပြန်တာကတော့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးပါပဲ။ ? အသားထဲမှာပြိုင်စံရှားတဲ့ဝက်သားကို စားနေကျဝက်သားဒုတ်ထိုးအရသာနဲ့ စားရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ ရှမ်းလာ့လို့ခေါ်တဲ့မာလာအရသာလေးနဲ့တွဲဖက်စားရမှာပါ။ ဟိုးအရင်စားနေကျသလို ဟင်းရည်ကိုသံပုရာသီးညှစ် ၊ ငရုတ်သီးထည့်ပြီးချဉ်စပ်ဖန်တီးနေစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ ဟင်းရည်ရော အသားအတွင်းထဲမှာပါ ချဉ်စပ်အရသာလေးတွေစိမ့်ဝင်နေလို့ အရသာထိထိမိမိလေးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသားတွေကလည်းအိဖတ်နေရောပဲ တစ်ချောင်း(၂၅၀)နဲ့လိုက်အောင် ခပ်ကြီးကြီးလှီးထားပေးတော့ တစ်ခုဆိုခံတွင်းနဲ့အပြည့်ပဲရယ်။ ကြိုက်သလောက်ရွေးထားတဲ့ဝက်သားဒုတ်ထိုးတွေကို မီးဖိုလေးပေါ်တင်ပြီး ပူပူနွေးနွေးလေးစားရတော့ စားရတာပိုခံတွင်းတွေ့တယ်။ အသားအိအိလေးကိုအချဉ်လေးနဲ့တို့ဝါးလိုက် ချဉ်စပ်ဟင်းရည်လေးသောက်လိုက်နဲ့ ရှယ်ဂေါ်ချက်ပဲ။
မာလာရှမ်းကောကို ပင်လယ်စာနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကလုံးဝသင့်တော်တယ်။ မင်မင်ဆိုအသားလုံးတွေ အသားတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးနဲ့မှာတာတောင် (၁)သောင်း(၆)ထောင်ပဲကျတယ်။ (၃)ယောက်လုံလုံလောက်လောက်စားလို့ရတယ်။ အရသာကလည်းစံချိန်မီဆိုတော့ ဘတ်ဂျတ်တွက်ပြီးမာလာရှမ်းကောသွားစားမယ်ဆို ဒီဆိုင်လေးနဲ့ကွက်တိပဲ။ စားနေကျဝက်သားဒုတ်ထိုးအရသာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ထူးခြားတာလေးတွေခံစားကြည့်ချင်ရင် ရှမ်းလာ့ဝက်သားဒုတ်ထိုးကို Try ကြည့်ပါနော်။ ဆိုင်လေးကသပ်ရပ်သန့်ရှင်းတော့ စားရတာတော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုလည်းလိုလေသေးမရှိပဲ။ နေ့လည်(၁၁)နာရီကနေ ည(၉)နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၃၃) ၊ လမ်းသစ်လမ်း /မော်တင်လမ်း ၊ အောက်ဘလောက် ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
In Reviews Tagged mala shan kaw, shan la pork stick Leaveacomment